ယခင်လကပြုလုပ်ခဲ့သော အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ယခင်အတိုးနှုန်းဖြစ်သည့် ၀. ၂၅%အတိုင်းမပြောင်းဘဲဆက်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့် ပေါင်တန်ဖိုးသိသိသာသာ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်. ဇူလိုင်လက အတိုးနှုန်းတင်ဖို့မဲပေးသူ ၃ဦးရှိခဲ့သော်လည်း သြဂုတ်လတွင်မဲပေးသူ ၂ဦးသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်. အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေတိုက်စာချုပ်များကို ၀ယ်ယူမှုမှာလည်း ယခင်ပမာဏအတိုင်းမပြောင်းလဲခဲ့ပါ.
အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ပြောနိုင်ခြေရှိနေသော်လည်း Brexitအခြေအနေကြောင့် စီးပွားရေးမငြိမ်သေးတာကိုအကြောင်းပြပြီး အတိုးနှုန်းတင်မည့်လေသံပျော့နေဦးမှာဖြစ်ပါသည်. အင်္ဂလန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲမှာ အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ပြောတာများနိုင်လား? စက်တင်ဘာ ၁၄၇က် ၁၄:၀၀ MTအချိန်တွင် အဖြေသိရပါလိမ့်မည်.